စာမူအသစ်တင်တိုင်း အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားစေရန်
အခုတလော လူပြောများခဲ့တဲ့ မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းကျန်အောင် နည်းနည်း ပြောခဲ့ချင်သေးတယ်။
ဒီကား ရုံတင်ချိန်က အန်တီဆွေဇင်ထိုက်ရဲ့ ဝေဖန်စကား “မြို့သားရိုက်တော့ မြို့လက်ရာပေါ့” ဆိုတာကြောင့် ရုပ်ရှင်လောကသား အချင်းချင်း အငြင်းတွေပွားကြ၊ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်ကြနဲ့ အတော်လေး ပွက်လောရိုက်နေကတည်းက ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်မိတဲ့ကားပါ။
မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတဲ့ စကားကို ပြောတဲ့သူတွေ စာရင်းမှာ ပါနေတဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ရုံမှာ အချိန်ပေးပြီး သွားကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်မှု ပေးနိုင်တာက စတယ် ဆိုပါစို့။
ကျနော် သွား မကြည့်မချင်း “မကြည့်သေးဘူးလား… သွားကြည့်အုန်း”ဆိုပြီး တိုက်တွန်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကြောင့်လည်း ရုံ စတင်ပြီး တစ်ပါတ်ကျော် ကြာမှ သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့။ ကြည့်ပြီးလျှင် ပြီးခြင်းပဲ အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းက ကျနော့် မှတ်ချက်ကို ကြားချင်တာကြောင့် ထင်ရဲ့ “ဘယ်လိုလဲ… ကောင်းတယ် မဟုတ်လား”တဲ့။
ကျနော် ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမလဲ မသိဘူး။
နေ့ တွေကတော့တစ်နေ့ ပြီး တစ်နေ့ကုန်နေခဲ့ ပြီ…..ဖြစ်တည်မှုအသစ်နဲ့ဆုံ ဖို့ ဘယ်နှစ်မှတ်တိုင်လောက်….. လိုသေးသလဲ.?ဘယ်သူကမှတစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့မရပ်တန့် ချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကံတရားရဲ့ရယ်သံတွေကြားမှာ…အရာရာက စနစ်တကျ မှားနေခဲ့ ပြီးသား။…. …. … … … … …ဒါကြောင့်လည်း……………..ငါ့ကို ငါပြန်ရှာ မတွေ့ သေးတာ။---------------သင့်အေးရိပ်Photo - from internet